Indlela yokufunda kwiimviwo zokugqibela kwiKholeji
Wonke umntu esikolweni kufuneka awathathe-iimviwo zokugqibela, oko kukuthi. Kodwa, akuyena wonke umntu owaziyo ukufundisisa iimviwo zokugqibela, kunye nekholejini apho izinto zikhohlakele khona. Iimviwo kwiikholeji zihluke kakhulu kunezikolo eziphakamileyo. Mhlawumbi, esikolweni esiphakeme, ufumane isicatshulwa sokufunda, okanye uluhlu olucacileyo lweenkcukacha ukuze ukwazi ukuhlolwa kwakho kokugqibela. Kwikholeji, awukwazi ukufumana nantoni na, ngoko kuya kufuneka ufunde ngendlela eyahlukileyo. Nazi iincwadana ezimbalwa zokufunda njani iimviwo zokugqibela kwiikholeji. Basebenzise ukuba niphumelele kakhulu!
5 Iingcebiso zokugqibela zokuHlola
Ukuchonga uhlobo loviwo
Abanye abaprofesa okanye abachasayo baya kukunika isicatshulwa se-essay ekupheleni kwe-semester. Cinga nje - iitoni kunye neetoni zeenkcukacha zixutywe kwisicatshulwa seeyure ezintathu. Uvakala kakhulu, akunjalo?
Abanye ootitshala banamathele ngokukhawuleza kwimpendulo emfutshane, ngelixa abanye baya kukunika iimvavanyo ezininzi zokukhetha okanye ukudibanisa iintlobo. Ndiyazi iiprofayili eziye zavumela amanqaku, ngelixa abanye bengenalo. Utshintsho alupheli, ngoko kuyimfuneko ukuba ufumene uhlobo loviwo oluya kufumana kunye nokuba ngaba uya kukwazi ukusebenzisa amanqaku akho.
Iimviwo zokugqibela ezikhethiweyo ezininzi zibhale ibhola eyahlukileyo yeex kunesicatshulwa sokugqibela sesicatshulwa, kwaye kunjalo, kufuneka ifundwe ngendlela eyahlukileyo! Buza, ukuba utitshala wakho akafiki.
Ulwahlulo kunye neConquer
Getty Images | Tim Macpherson
Ngoko, unemetter yezinto eziphathekayo ukuze ukhumbule usuku olukhulu. Ukwazi njani ukuwufunda konke? Ezinye zezinto owazifundiswa ekuqaleni kweeveki zokuqala ezisi-9 ziye zaphuma entlokweni yakho!
Ukwahlula izinto ezifunekayo ukuba ufunde ngokumalunga nenani leentsuku ngaphambi komhla phambi kovavanyo. (Uya kufuneka umhla wokuhlaziywa kwangaphambili ngaphambi kokugqibela). Emva koko, hlukanisa izinto ngokufanelekileyo.
Ngokomzekelo, ukuba unemihla elishumi elinanye ngaphambi kokuba uhlolwe, kwaye ufuna ukuqala ukufunda, uze usike i-semester ukuya kwishumi elinesithathu elinganayo kwaye ufunde icandelo ngosuku. Shiya olunye usuku ngaphambi kokugqibela ukuhlaziya yonke into . Ngaloo ndlela, awuyi kuphazamiseka ubunzima bomsebenzi.
Getty Images | IBill Varie
Njengoko uyazi ukuba ungumfundi wekholeji, akubalulekanga kuphela ukufunda indlela yokufunda iimviwo zokugqibela, kubalulekile ukufumana ixesha lokwenza! Uxakekile - ndiyifumana loo nto. Unomsebenzi, kunye neeklasi, kunye neenkcukacha zecandelo kunye nemidlalo kunye nokufaneleka kunye neadda yadda yadda.
Kufuneka udwebe iyure okanye njalo ngosuku ukuze ulungele ukufundisisa kwishedyuli yakho. Ayikuzibonakalisa - uza kuhlawulela ezinye izinto ukuze zenziwe. Khangela ixesha lolawulo lwam iseshati uze uzalise yonke imithwalo / uxanduva / njl. unayo iveki enye kwaye ubone apho unokukwazi ukunqumla khona ukuze uqiniseke ukuba ulungele usuku lovavanyo.
Funda isitayela sakho sokuFunda
Unokuba ngumfundi osondelene kwaye ungayiqondi. Thatha iindlela zokufunda kunye nemibuzo phambi kokuba ufunde - i-solo yakho, iseshoni yokufunda isitifiketi ingasenzi nto nantoni na!
Okanye, unokuba ngumntu ofundisisa iqela . Ngaba uyinike ithombo? Ngamanye amaxesha, abafundi bafundela okusemgangathweni ekuhloleni iimviwo zokugqibela nabanye.
Okanye, mhlawumbi ufunda i-solo. Intle kakhulu! Kodwa qaphela ukuba kungcono ukuba ufunde nomculo okanye ngaphandle, kwaye ukhethe indawo efanelekileyo yokufunda kuyo - ivenkile efihliweyo yeefowuni kunye nomsindo omhlophe ungakuphazamisi kangako ngaphezu kwelayibrari. Wonke umntu uhlukile!
Kwikholeji, kubalulekile ukuba ufunde indlela ofunda ngayo, njengoko unako ukukhokelwa. Kulo nqanaba lomdlalo, ootitshala baphonsela ukuba uyazi into oyenzayo. Qinisekisa ukuba wenza!
I-Session Review - Ewe, nceda!
Getty Images | Justin Lewis
Ngaphezulu, uprofesa wakho okanye uTA uya kumkela iseshoni yokuphonononga ngaphambi kokuhlolwa kokugqibela. Ngalendlela zonke, yiya kwizinto ezifundwayo. Ukuba uhluleka ukuya eklasini, ngoko unengxaki enkulu! Le "yiyo yokufunda iimviwo zokugqibela" 101! Kuyo, uya kufunda izinto ezifana nohlobo loviwo, luhlobo luni lwazi oluza kulindeleka ukuba lubonise, kwaye ukuba luyi -essay test , mhlawumbi uya kufumana ukhetho lwezihloko onokuzibona ngosuku lokuvavanya . Nantoni na oyenzayo, ungaphuthelwa!
6 Amanyathelo okuZilula xa Ufunda
I-Acoustic Guitar (I-String Six) IProfayili yabaQala
IiNew Horizons kwiNkqubo yeeNkqubo zangaphandle
Indlela yokwenza iBallet Barre
Indlela iLasers isebenza ngayo
Iphrofayili yeS Hero Hero Jason
Iimpawu Eziqabulayo Ngee-Butterflies
Isingeniso ekuSebenziseni Uhlalutyo loLungiso
I-AP Calculus AB Iinkcukacha zovavanyo
7 I-Valentine's Day Day Ideas Ideas
Usuku lomama: Imbali yeMithendeleko